Novambra, 2018 ArcGIS-ESRI, Fampianarana CAD / GIS
Rehefa mahita ny fahafaha-miasa Smart Campus ArcGIS amin'ny asa toy ny Travel lalana eo amin'ny latabatra teo amin'ny fahatelo rihana ny fanorenana ny Professional Services ary ny iray ao amin'ny Q Auditorium, noho ny na tany anatiny sy ny fampidirana BIM tahirin-kevitra, dia mahita Ny fametrahana ny fampidirana ny Geo-engineering dia miditra amin'ny fahitana iray mifamatotra.
Mampahatsiahy antsika fa tsy maintsy mandeha an-tongotra lavitra kokoa ny geôlôjika sy ny injeniera mba hahatakarana ny modely, sy ny code programming.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika ny fiovan'ny fironana amin'ny tontolon'ny birao mavesatra mankany amin'ny sombin-kaody maivana. Azo antoka fa nisy mpahay siansa solosaina nanao zavakanto niaraka tamin'ny mpizara GIS, Gis Engine na zavatra tao Gis rehefa tsy hitany ny fomba niasan'i Leaflet tamina taranja iray. MappingGis; Tsy gaga aho raha nandeha nitsidika ny fasana nankany amin'ny mpanolo-tsaina teo alohany izy.
Ireo mpampiranty ny webinar dia nipoitra tamin'ny alàlan'ny lozisialy tsara momba ny fampiasana 3D amin'ny fampiharana ArcGIS, ary ny fomba isehoany amin'ny sehatra: mpijery an-tsehatra, Maps Map, na Web App Builder arakaraka ny tanjon'ny fianarana.
Zava-dehibe ny hamaritana ireo hevitra fototra mifandraika amin'ny lohahevitra 3D hatrany am-piandohana, indrindra satria mihoatra ny fisehosehoana ny volany, dia mikasa ny hanao maodely modely. Ary koa ny lafiny izay mbola manakiana amin'ny resaka rafitra fototra takiana mba hampandehanana ireo dingana mifandraika amin'ity karazana data ity izay samy hafa tanteraka amin'ny 2D, toy ny karatra sary tsara, ny fanohanana OpenGL tafiditra ao anaty tranokala w / WebGL.
Raha tsy izany, lazao azy ireo ny namana SELPER, tao amin'ny fitantanana lehibe amin'ny fitantanana ny haitao amin'ny teknolojian'ny GIS, izay nisy ny sakana teo anoloan'ny versions of OpenGL ao amin'ny karatra grafika Nvidia ao amin'ny Oniversite nisy azy io. Nampitomboina be tamin'ny hetsi-panoheran'ireo mpianatra tao Bogota izay nanasarotra ny fanaovana fitsapana ampy ny andro teo.
Ankoatra izany, nanambara ny fanombohana fanohanana izy ireo mba hametraka ilay fitaovana amin'ny fitaovana finday toy ny finday na takelaka.
Ny maritrano dia karazana 4.x ary ahitana singa sy widget misy maso, ankoatry ny fanekena marobe fampahalalana avy amin'ny loharanom-baovao samihafa. Mihoatra ny 3.x ity maritrano ity satria amin'ity sehatra ity ihany no misy ny sary 3D. Ny fitaovana Webscene sy SceneView dia ampiasaina hitantanana ny angona 3D ary tafiditra tanteraka ao anaty API, ankoatry ny fomba fampifanarahana ny maodely 3D amin'ny angona azo tamin'ny fampiharana teo aloha.
sasin-tenin'ny, izay mamela ny fihodinan'ny fakantsary ao amin'ny workspace.
Goto: dia ampiasaina hametrahana fomba fijery araka izay tianao ho hita ao amin'ny 3D, ary azonao atao ny manao sary miaraka amin'ity fitaovana ity, toy ny fametrahana fepetra sasany sasin-tenin'ny hamorona sary mihetsika.
tomap: dia mandrindra ny fomba fijery ary mametraka izany ao amin'ny sarintany 2D
toScreen: dia ahafahanao manondro teboka iray ao amin'ny sarin'ny 2D ary apetraho ao amin'ny fomba fijery 3D izy io
hitTest: dia ampiasaina mba hamaritana ireo toetra mampiavaka azy manokana
Voafaritra ihany koa izy ireo fa ny fananganana sarintany 3D manana fitaovana mitovy hamorona 2d iray, toy ny fampiasana basemaps, sosona na sosona izay manohana ihany koa fa ho an'ny 2D (WMS, vectors na CSV).
Na izany aza, tsy maintsy dinihina fa ny sarin'ny 2D dia tsy ahitana ny fampahalalana ny "Z" (haavony), izany no mahatonga ny fandikana ny angona ilaina mba hananana sarina mifandraika amin'ny 3D ho rahona, meshlayersna elevationlayers. Ao anatin'ny API dia afaka mijery ao amin'ny 3D ireo sosona toy ny isam-ponina ao anatin'ny nahita hevitra manokana, tahaka ny endrik'Andriamanitra (1) nandinika am-boalohany an-tsaha, ary ny sary (2) araka ny miova avy amin'ny QUERY na fanadihadiana natao.
Nasehon'izy ireo ohatra maromaro momba ny fomba anehoana ny angona, ohatra, ny angona angonin'ny SceneLayers (teboka), ary ny zavatra 3D (3D Objects).
Ho an'ny tanàn-dehibe dia fitaovana matanjaka ny solontenan'ny zavatra 3D, satria azo atao ny mahita, tsy ny toerana misy ny toerana ihany, fa ny habeny, ny fifandraisany amin'ny tontolo iainana, ary ny toetra mampiavaka azy tsirairay avy. ireo zavatra. Ity sary manaraka ity dia mampiseho ny fomba nifidianan'izy ireo sendra tranobe iray tao New York City, ary ny toetrany rehetra dia azo jerena. Toy izany koa, fangatahana marobe dia azo omanina arakaraka ny rafitra, toy ny: misy tranobe sasany izay manana haavo manokana na famaritana ny làlana tsara indrindra
Manohana ny fikarakarana ny lay IntegratedMeshLayer, izay sakana amin'ny fampahalalana avy amin'ny fitaovana toy ny drones. Tsy misy fampahalalana voatokana avy amin'ny rafitra tsirairay toy ny sary teo aloha, fa betsaka ny fampahalalana miaraka amin'ny toetra 3D.
Raha ny hevitra rahona, dia afaka milalao ny haben'ny ny teboka mba hahazo tsara kokoa fahitana ny tahirin-kevitra, satria teboka tsirairay dia afaka manana tapitrisa tapitrisany sosona ny angon-drakitra hevitra, nefa tsy aseho ho toy ny zavatra 3D mihitsy.
Notondroin'izy ireo ny fampiasana simbolojika amin'ny angona 3D, izay aseho amin'ny endrika fisaka / fisaka, ary ny sary an'ohatra mifandraika amin'ireo zavatra noforonina tamin'ny 3D. Ireo dia mety amin'ny fomba manokana arakaraka ny karazan-javatra. Nasehon'izy ireo ny fampiasana ireo antsoina hoe Extrudes "handokoana" ny rafitra arakaraka ny toetrany,
Ny karazana fampisehoana azo ampiasaina dia naseho: simplerenderer, izay ahitana ireo singa rehetra manana endrika marika, ny uniqueValueRenderer izay ahafahanao mamantatra ireo zavatra ireo, araka ny toetra iray, ary ny ClassBreakRenderer izay ahitana ny toetra amam-panamarinan'ny ankizy tsirairay dia misy ifandraisany amin'ny kilasy iray: amin'ity tranga ity dia nanondro ny halaviran-dalana noraisin'ny trano mba hiditra amin'ny rafi-pitateram-bahoaka.
Widgets 3D: miaraka amin'ny fihetsiketsehana fanehoan-kevitra dia nanondro ny elanelana misy ny zavatra, na horizontaly na vertical.
Fananganana ny fampiharana: avy amin'ny toerana sy ny zavatra 3D.
Ny fomba fijery SceneView: mamaritra ny votoatiny sy ny endriky ny fomba fijery 3D ary azo alaina ao amin'ny Portal for ArcGIS.
Fandrefesana geodesika: tsy mifantoka fotsiny amin'ny rafitry ny faritra, fa koa mamela ny halavam-potoana eny ambonin'ny tany.
Building fangatahana, modeling 3D araka ny zava-misy aseho toerana, ka manjary miboiboika andalana na miantso izay endri-javatra sasany dia voalaza, toy ny Tags izay eo amin'ny sehatra toy ny Google Earth, amin'ity tranga ity 3D
Declutter: nampiasaina mba hanadio na sivana marika na toetra izay ilaina mba hahita eo amin'ny sarintany 3D, dia toy izany no fanalavirana be dia be ny marika izay tsy mamela ny tsy fijerena, ka mamaly ny tabataba, rehefa fanampian'ny zavatra voafaritra tsara.
Amboary ny sehatra
Slice widget: izay handefa fampahalalana mialoha ho an'ny 3D zavatra
Mamaky betsaka ny angon-drakitra: tsy mifanaraka amin'ny tanàna manokana, fa avy amin'ny firenena (firenena).
Point filalaovana marika
Fampidirana ity webinar ity ho an'ny geoengineering
Raha fintinina, tena mitombina ilay lohahevitra; ny fahatsiarovana fa ny fironana mankany amin'ny Digital Twins sy Smart Cities dia mitaky, ankoatry ny fieritreretana ny fitantanana fampahalalana, izay efa tena nihoatra ny modeliny, dia tokony horesahina ny fampidirana ny maodelin'ny asa. Ny tsena dia malalaka, mampanantena ary hatramin'izao dia efa manana vahaolana saika turnkey ho an'ny mpampiasa farany; na dia ho antsika izay mampiasa teknolojia hanaovana fitaovana tsy am-bifotsy aza dia mbola mafy ny lalana. Midika izany, mampiaraka ireo refy hafa toa ny fotoana, ny vidiny ary ny fihodinan'ny fiainana; tsy eo amin'ny haavon'ny angon-drakitra sy ny haitao izay, araka ny hamafisinay, dia olana mazava, fa ny fampifanarahana tsy dia maharary amin'ny fihetsiky ny tena mpampiasa alohan'ny mpanelanelana amin'ny rojom-pifandraisana izay mandalo ny fampahalalana momba ny habaka. Avy amin'ny lafiny ESRI dia somary sarotra ny fananganana angon-drakitra, satria na dia efa azonao atao aza ny mampiditra ny angona BIM naorina eo ambonin'ny Revit, dia mbola hita fa tontolo roa misaraka izay mitaky fanovana sarotra. Ireo sanganasa vaovao dia azo antoka fa ho azo ampiasaina amin'ny maodely BIM, saingy misy fampahalalana CAD be loatra izay hitondra azy any amin'ny Toerana anatiny, miaraka amin'ny habaka polygonisation, ny fiakarana ary ny lamina mahazatra dia lafo ihany.
Na izany aza, raha mendrika homena laza i Esri, dia ny fandrosoana amin'ny fanaovana sary an-tsaina mahaliana sy tsotra. Azoko an-tsaina sahady ny fahadisoam-panantenan'i Don Jack, amin'ny safidiny «andao hanamora izany» ireo mpitarika ny tsipika mitsangana AutoDesk, ao anatin'io fanambadiana tara nefa nahomby io izay «saika fampiharana ArcGIS Pro»Tokony ho hitanao eo ambanin'ireo ravin-kazo toy ny kiraro misy sombin-javatra maromaro izay mitovy ihany, saingy sarotra ny manamora ny votoatin'ny vokatra tadiavin'ny topografia, ny injeniera indostrialy, ny injeniera sivily ary ny maritrano. Ary ny fironana amin'ny fahatsoran'ny sarintany zavakanto izay nijalian'ny GIS, dia tsy maintsy iainana ny CAD mahazatra, noho io fahazarana manadino fa ny drafitra dia mpanelanelana ihany, fa ny zava-dehibe dia ny hampandeha ilay tranobe.
Tsara fanao modeling GIS, maivana, mifantoka amin'ny abstraction ny zava-misy dia ilaina ny CAD / BIM mifangaro, izay nandritra ny fotoana kelikely dia tsy maintsy velona amin'ny fananganan'anaka amin'ny BIM any amin'ny tany maro mandeha ny ela, indrindra fa ny fitsipika ineptitude Ireo manam-pahefana tranainy dia nanambatra ireo taratasy roa voalohany amin'ny fahitana AECO.
Ireto misy sombiny sasantsasany izay soso-kevitrao mba hampandehanana anareo hatrany, amin'ny vidiny sarobidy.
ArcGIS Pro - Mianara mora!Golgi Alvarez, AulaGEO AkademiaArcGIS Pro dia dika vaovao amin'ny ArcMap€ 199.99€ 159.99 3.8 (44 ratings)
bestseller Nuxt.js - Vue.js amin'ny SteroidsManorata fampiharana Vue JS tena mahaliana amin'ny Nuxt.js. Nuxt dia manampy ny mpizara mora amin'ny lafiny rendering sy ny fomba fanamboarana fampirimana amin'ny lahatahiry.€ 139.99€ 119.99 4.6
Previous Post«Previous Skrill - safidy iray amin'ny Paypal
Next Post Ny anjara asan'ny geotechnologies eo amin'ny fananganana ny Catastro 3Dmanaraka »